FAQ momba ny fitsaboana Proton ho an'ny fitsaboana homamiadana - Proton California
Valiny amin'ny fanontanianao momba ny fitsaboana Proton
Fantatray fa rehefa voamarina fa voan'ny homamiadana ianao dia mila mandray fanapahan-kevitra lehibe maro ary mety manana fanontaniana maromaro. Tadiavo eto ambany ny valinteninao na antsoy izahay amin'ny 858.299.5984 hiresaka mivantana amin'ny iray amin'ireo ekipantsika.
NAHOANA NO TOKONY HITADIHOAN'NY PROTON NO TOKONY HATRANY AMIN'NY RADIATION STANDARD?
Ny fitsaboana Proton dia endrika iray amin'ny fitsaboana taratra marina indrindra izay miteraka fihenan'ny taratra amin'ny sela ara-pahasalamana ara-dalàna ao amin'ny vatan'ny marary. Ny marary dia afaka sitrana haingana kokoa ary mitatitra ny voka-dratsy hafa, miaraka amin'ny fanalefahana ny mety hitrangan'ny homamiadana ambaratonga faharoa raha oharina amin'ny taratra taratra x-ray mahazatra. Ohatra, ny lehilahy voan'ny kanseran'ny prostaty dia mitatitra fa vitsy ny tranga voan'ny tsinay sy ny tatavia miaraka amin'ny fitsaboana proton.
INONA NO ATAON'NY PROTON-BEAM PROTON THERAPY?
California Protons no ivon'ny proton voalohany tao amin'ny firenena nanolotra teknolojia proton beam proton ao amin'ny efitrano fitsaboana proton anay rehetra. Ny fomba fitsaboana mandroso indrindra amin'ny fitsaboana proton dia ny fitsaboana proton-beam proton. Ity taratra proton ity dia mankany amin'ny faritra iray ao anatin'ny 2 milimetatra amin'ny fivontosana mampiasa andriamby mahery. Ny fatra taratra taratra taratra taratra dia azo kendrena amin'ny endrika sy habe mampiavaka ny fivontosana ary azo alefa any amin'ireo fivontosana tena akaiky ireo rafitra mahazatra izay tiantsika tsy hararaotina. Ny sisiny tery dia miaro ny sela salama sy ny taova manodidina azy amin'ny taratra. Tsy toy ny fitsaboana fitsaboana proton taloha efa niparitaka be kokoa, ny teknolojia fizahana pensilihazo dia manatsara kokoa ny fahafahan'ny fitsaboana proton beam. Ity haitao vita amin'ny pensilihazo ity dia mamela ny olona iray hamonjy Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT) - handamina tsara ny elanelam-potoana sy ny tanjaky ny andry proton mba hamafana an'ity tsipika proton tery ity manerana ny fivontosana amin'ny kapoka tsara, hampitombo ny tanjaka sy ny fatra fatra sosona ao anaty fivontosana.
INDRINDRA INDRINDRA NY CANCERA?
Ny fitsaboana Proton dia azo ampiasaina hitsaboana ireo homamiadana sy fivontosana izay tsaboin'ny taratra tara-pahazavana mahazatra. Toy ny taratra mahazatra ihany, misy kosa ny homamiadana izay tsy azo tsaboina mora foana miaraka amin'ny protôna, toy ny homamiadan'ny ra. Misy ihany koa ny homamiadana izay tsy ampiasana ny fitsaboana proton arakaraka ny toe-pahasalaman'ny marary iray, toy ny dingana na ny finan'ny homamiadana. Matetika ny ekipantsika mpitsabo dia mahita ny marary hanome hevitra faharoa momba ny ho kandidà amin'ny fitsaboana proton satria zava-dehibe ny fanombanana tsirairay ny tranga tsirairay hamaritana raha safidy fitsaboana tsara ny safidy proton. Ny faritra iray manokana ahitantsika marary marobe dia ny homamiadana izay niverina tany amin'ny faritra iray ihany taorian'ny fitsaboana tamin'ny taratra teo aloha. Miaraka amin'ny marimarina ny fitsaboana proton, matetika isika dia afaka manome taratra fitsaboana faharoa izay raha tsy izany dia tsy azo natao tamin'ny fitsaboana tara-pahazavana x. Tsidiho ny fitsaboana proton anay Conditions Treated pejy hianarana bebe kokoa.
IZA NO KANDIDA HO AN'NY THERAPY PROTON
Ireo marary manana fivontosana mafy eo akaikin'ny taova mora tohina, toy ny homamiadan'ny atidoha, prostaty, tratra ary havokavoka dia mpirotsaka hofidiana proton tsara indrindra. Ankoatr'izay, ny marary voan'ny kanseran'ny zaza miverimberina, zaza ary karazana karazana homamiadana hafa dia kandida mety avokoa. Azonao atao ny mijery ny fepetra rehetra tsaboin'i California Protons Eto.
TOHINY NY PITSITRAN'NY CANCER Notsaboina amin'ny THERAPY PROTON?
Maneran-tany dia marary 200,000 no voan'ny fitsaboana proton. Amin'ny maha ivon-toerana azy dia miara-miasa amin'ny marary manerana an'izao tontolo izao i California Protons. Eo an-toerana dia mifandraika amin'ny Network San Diego Health Cancer Network sy hopitaly Rady Children's. Ny ivon-toerantsika dia efa nitsabo olona maherin'ny 3,500 hatramin'ny nanokafana azy tamin'ny 2015.
MAHAROA NY FIVORIAMBENANA PROTON THERAPY?
Ny ora rehetra amin'ny fotoana voatondro dia afaka maharitra ora maro, ao anatin'izany ny fotoana takiana eo amin'ny toerana mba hanavaozana ny antontan-taratasinao sy ny fampahalalana hafa sy ny fotoana miaraka amin'ny oncologist amin'ny resaka radiation.
INONA NO IANAO MBOLA HATONDRANA AMIN'NY FIKAMBANANA
Iangavio ny taratasy vita rehetra izay nalefa ho anao, ary koa ny karatra fiantohana, fakantsary CD (s) sy ny fampahalalana hafa angatahana alohan'ity fanendrena ity. Hiantso anao izahay miaraka amin'ny fampahatsiahivana ny andro alohan'ny fotoana anaovana ny fifampidinihana.
INONA NO atao hoe CT-SIM?
Fohy amin'ny "CT Simulation", dia fotoana iray izay hapetrakao eo amina latabatra fitsaboana eo amin'ny toerana tena ilaina amin'ny toerana fivontosana sy fivontosana. Raha ilaina amin'ny drafi-pitsaboana anao, namboarina ny fitaovana famonoan-tena mahazatra toy ny saron-tava, loham-pianakaviana na fitaovana hafa.
METY METY Haharitra hafiriana ny CT-SIM?
Amin'ny ankapobeny dia maharitra adiny iray ity fanendrena ity. Mety mitaky adiny telo raha ilaina ny sary fanampiny.
INONA NY V-SIM?
Fohy ho an'ny "Simulation" fanamarinana, "izany dia rehefa voamarina ny fitsaboana sy ny fanamboarana alohan'ny handefasana ny fitsaboana voalohany (beam on) mba hahazoana antoka sy marina ny kajy, ny fandrefesana ary ny toeran'ny marary.
METY FAHAROA NY V-SIM METY
Tokony ho 30 minitra eo ho eo.
METY FAHAROA NY FAMORONANA NY Drafitra Fitsaboana THERAPY TRANONDRIKA?
Ny ora antonony ho an'ny ankamaroan'ny marary dia 10 ka hatramin'ny 14 andro rehefa azo ny sary sy ny firaketana ara-pitsaboana rehetra.
EFITRA NY FITSABOANA IANAO IANAO IREO PROTON THERAPY?
Ny isan'ireo atrikasa tsirairay miankina amin'ny karazana homamiadana sy ny toeranao, ary koa raha toa ny fitsaboana dia mifanentana amin'ny fitsaboana hafa toa ny fitsaboana aretin-tsaina na fitsaboana simika. Azafady mba hadinoo ny momba ireo olana rehetra anananao momba ny sidina efa nomanina mialoha na ny fanoloran-tena voafaritra amin'ny daty fikarakarana anao.
MAHAROA NY FIVORIANA NY FITSABOANA PROTONY?
Ny fotoam-pitsaboana antonony dia maharitra 30 minitra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny fotoana ampiasaina amin'ny fanovana akanjo sy ny nomanina ary napetraka eo amin'ny latabatra fitsaboana.
NAHOANA IANAO NO mila fady hanamarinana ny fitsaboana?
Ny rafitra dia mampitandrina ny ekipa mpikarakara ny fahatongavanao.
AOKA ve ny biby fiompy?
Biby biby manompo ihany no voaofana manokana hanampy ny olona sembana.
INONA NO atao hoe OTV?
Ny «On mpitsabo mitsabo» dia fivoriana isan-kerinandro miaraka amin'ny onkolojinao amin'ny fantsom-pahazotoana mandritra ny fotoam-pitsaboana fitsaboana protoninao mba hanarahana ny fivoarana ary hamaha ireo fanontaniana na ahiahy anananao. Ny oncologist amin'ny taratrao dia mety hanova ny drafi-panafaranao miorina amin'ny fomba fiheveran'ny homamiadana anao amin'ny fitsaboana.
INDRO INDRINDRA NY FONONONY TOA Hianarako raha toa ka mandray ny drafi-piantohana ara-pahasalamana ny foibe?
Azonao atao ny manatona anay amin'ny 858.299.5984 (Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, 8 maraina hatramin'ny 5 hariva Fotoanan'ny Pasifika).
INDRINDRA INDRINDRA IZAO REHEFA VITSY NY FITSABOANA NY PROTON THERAPY?
Ny mpitsabo mpanampy onkolojian'ny taratrao dia hanome anao ny taratasinao fitsaboana ary ny torolàlana momba ny fikarakarana aorinan'ny fitsaboana anao. Ny lanonana faneno lakolosy miaraka amin'ny ekipa fikarakaranao dia nentina nankalazana mba hankalazana ny fahavitan'ny fitsaboana proton.
AHOANA NO HANGATAKAKANA NY REHETRA REHETRA FITSABOANA?
Antsoy azafady ny afovoany ao 858.299.5984 (Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, 8 maraina hatramin'ny 5 hariva Fotoanan'ny Pasifika).
Oviana no misoratra anarana manaraka ity aorian'ny fitsaboana feno?
Ireo fanendrena ny fanaraha-maso dia matetika no resahina mandritra ny fizotranareo.
MISY FOMBA hafa ihany koa hampidirina am-ponja ao amin'ny foibe mandritra ny fitsaboana?
Ireo marary, olona ao amin'ny fianakaviana ary olon-kafa liana amin'ny fitsaboana proton dia afaka mifandray hatrany amin'ny California Protons cancer Therapy Center amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny California Protons Connect. Ny mpikambana dia mankafy ny mifandray amin'ny mpikambana sy ny marary hafa dia mahazo tombony amin'ny fizarana ny zavatra niainany, mamaly ireo fanontaniana ary manome fifanohanana ara-pihetseham-po. Azonao atao ihany koa ny manolo-tena amin'ny Program Protons Champion an'ny California mba hanampiana ny marary vaovao sy ankehitriny, na manatrika hetsika na vondrona mpanohana. Ny marary ankehitriny sy ny taloha dia mikasa ny hetsika sosialy tsy tapaka ary mamoaka antsipirihany ao amin'ny efitranon'ny ivon-tanananay. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ireo marary sy mpiasa amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook amin'ny: facebook.com/CaliforniaProtons.